राजधानी हल्लिनेगरी फेरि गयो भूकम्पको कडा धक्का, कहाँ हो केन्द्रविन्दु ? — Imandarmedia.com
१माओवादी केन्द्रका थप दुई सांसद कारबाहीमा, को हुन उनीहरु ?
२राष्ट्रपतिले दिएको तक्मामा किन छैन चुच्चे नक्सा ? यस्तो छ खास रहस्य
४मेयर कप क्रिकेटको उपाधि एपीएफलाई
५नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै, २४ घण्टामा कति थपिए ?
६प्रधानमन्त्रीलाई २० हजार जरिवाना, यस्तो छ कारण
७माधव नेपालले यसरी गरे देशभरका आफ्नै नेता कार्यकर्ताको घोर अपमान
८भारतमा एकैदिन भेटिए झण्डै डेढ लाख भन्दा बढी नयाँ संक्रमित
९रूपन्देहीलाई हराउँदै पञ्जाव पुलिस विराट गोल्डकपको क्वाटरफाइनलमा
१०सकियो तीन दलको बैठक
११बुढानीलकण्ठमा शुरु भयो तीन दलको बैठक
१२२८८ जना कोरोना संक्रमित थपिए
राजधानी हल्लिनेगरी फेरि गयो भूकम्पको कडा धक्का, कहाँ हो केन्द्रविन्दु ?
काठमाडौँ । छिमेकी मुलुक भारतको राजधानी दिल्लीमा बिहीबार मध्यराति भूकम्प गएको छ । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार राति ११ बजेर ४५ मिनेटमा भूकम्पको धक्का महशुस भएको हो ।
भारतको नेसनल सेन्टर फर सिस्मोलजीका अनुसार राजजस्थानको अलवर केन्द्र भएर ४.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। जसको झट्का दिल्ली-एनसीआर इलाकासम्म महसुस गरिएको थियो।
यसैबीच भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या साढे ९९ लाख ७७ लाख नाघेको छ । साढे २ महिनायता संक्रमण दर घट्दै गएको भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा २६ हजार ६८८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । पछिल्लो वृद्धिसँगै संक्रमितको संख्या ९९ लाख ७७ हजार ७६० पुगेको छ ।
संक्रमितमध्ये अहिलेसम्म ९५ लाख १९ हजार ९२८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । यस्तै त्यहाँ संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ४४ हजार नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३४२ जनाको मृत्यु भएसँगै भारतमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख ४४ हजार ८२९ पुगेको हो ।
यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा अनिवार्य मास्क लगाउन आह्वान गरेको छ । सङ्गठनले नयाँ वर्ष सन् २०२१ मा कोरोना महामारीको न्यूनीकरण हुने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
नयाँ वर्ष र क्रिसमस मनाउने क्रममा सामान्य हेलचेक्रयाइँ गरियो भने युरोपभरि नै कोरोना भाइरसको महामारी अझ बढ्ने खतरा भएको भन्दै डब्ल्यूएचओले सचेत गराएको छ । डब्ल्यूएचओले नयाँ वर्ष सन् २०२१ को पहिलो हप्ता र पहिलो महिना कोरोना महामारीको दृष्टिकोणले उच्च जोखिमको समय हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
उच्च जोखिमको बेलामा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने र सँगसगै काम गर्नुपर्नेतर्फ पनि सङ्गठनले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हरेक व्यक्ति–व्यक्तिको सतर्कताले समुदायलाई सुरक्षित बनाउन सकिने भएकाले हरेकले सावधानी अपनाउनुपर्नेमा सङ्गठनले जोड दिएको छ ।
बिदा वा चाडपर्व मनाउन सामान्य होसियार भए मात्रै पनि ठूलो समस्या र ठूलो क्षतिबाट मुक्त भइने सङ्गठनले भनेको छ । सकेसम्म परिवार मात्रै सहभागी हुने गरी आफ्नै घरमा नयाँ वर्ष र क्रिसमस मनाउन र बाहिर जानै परेमा मास्कको पूर्ण प्रयोग गर्न सङ्गठनको अनुरोध छ ।